Nin kursi u sameeyay madaxweyne oo lacag ka doonaya dowladda - BBC News Somali
Nin kursi u sameeyay madaxweyne oo lacag ka doonaya dowladda
11 Juunyo 2018
Image caption Daniel Arap Moi ayaa xilka hayay intii u dhaxaysay 1979 illaa 2002-dii.
Kursiga madaxweynaha waa kan ugu sareeya ee dal laga fikiro, mana ahan mid la helo, balse ka waran ninka kursigaas inta laga qaatay, aanan haddane wali wax lacag ah laga siinin?.
Hagaag, kama hadlayno xilka madaxweynenimo, ee waxaa laga hadlayaa kursi uu madaxweyne ku fariistay, taas oo ninkii sameeyay aanan wax lacag ah laga siinin 26 sano kadib.
Nin nijaar ah oo sameeya kuraasta oo u dhashay dalka Kenya ayaa dacwad ku furey dowladda dalkaas, wuxuuna doonayaa in la siiyo lacag dhan $2 milyan oo doolar, maadaamaa aanan la siinin kuraas looga qaaday madaxweyne Daniel Arap Moi in uu ku fariisto.
Solomon Njoroge Kiore ayaa sheegay in kuraasta laga qaatay, madaxweynaha oo hadda xilka ka dagayna uu isticmaalayay muddo sanad ah, balse wasaaradda gaashaandhiga oo loo igmaday in ay kuraasta soo iibiso aysan wax lacag ah siinin najaarka.
Kuraastii ayaa loo celiyay, waxayna hadda iska dhex yaalaan dukaankiisa, islamarkaasna ciriiri badan ku hayaan maadaamaa ay yihiin kuwaas waaweyn.
Wargeys Nairobi kasoo baxa ayaa Njoroge kasoo xigtay isaga oo leh "Waa astaan awoodeed, waxaa muddo sanad ah isticmaalay madaxweyne, ma jirto qof loo ogolyahay in uu taabto, ganacsigayga hoos ayuu u dhacay maadaamaa aan dadka u diiday in ay taabtaan".
Garyaqaan dowladda u hadlay ayaa bishii Feberaayo sheegay in ay xiriir la samayn doonaan ninkan, balse wali wax war ah lagama helin.
Mr Njoroge ayaa sheegay in uu jeclaan lahaa in kuraastan la dhigo madxafka dhawaan laga sameeyay madaxtooyada Kenya.